HFE vahaolana vahaolana madio ho an'ny fitaovana sy ny ampahany China Manufacturer
Description:Solonirina fanadiovana tsotra ho an'ny fitaovana,Famahana ny vahaolana ho an'ny fanadiovana,HFE voaaro ny vahaolana
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny singa sy ny ampahany > HFE vahaolana vahaolana madio ho an&#39;ny fitaovana sy ny ampahany
Hydrofluoroether ny tsiranoka Dryness: teboka manify matevina, vongan-drivotra mipoitra sy fantson-drano, tena maina. Fitaovana fanadiovana ho an'ny singa sy ny singa dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny vahaolana manala ny voly dia ny solika fanadiovana dia tsy fahampian'ny solika tsy mitsaha-mitombo, ny tebiteby ambany dia ambany, ny tendrony ambany, ny lozam-pifamoivoizana tsy misy fialana ary ny fitomboana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany.
Karazam-bolo momba ny vahaolana fanadiovana ho an'ny singa sy ny ampahany:
7.The Hydrofluoroether ranon-javatra taorian'ny fanadiovana dia azo amboarina amin'ny alalan'ny distilling hoe: Izao no hampihena fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
Coatings for parametrisation fizika physiquechemical:
Mampiasaina ny fiasana indostrialy
Ity fampiroboroboana High Performance ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Ity kapaoty momba ny simika ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifam-pampandrosoana, mora voatahiry sy nentina.
Hydrofluoroether tsy misy poizina sy fanadiovana ny Components Contact Now
Solonirina fanadiovana tsotra ho an'ny fitaovana Famahana ny vahaolana ho an'ny fanadiovana HFE voaaro ny vahaolana